သတင်း - အတုလုပ်ခြင်းနှင့် လှိမ့်ခြင်း ကွာခြားချက်
ထုလုပ်ခြင်း သည် အရည်ကျိုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပျော့ပျောင်းသော သွန်းလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သေးငယ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော သတ္တုသွယ်တန်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် အတုပြုလုပ်ခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် တူညီသောပစ္စည်းများ၏ သွန်းလုပ်ခြင်းထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။မြင့်မားသောဝန်နှင့်ပြင်းထန်သောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများရှိသောဆက်စပ်စက်ပစ္စည်းများ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ဖောင်များကိုလိပ်၊ ပရိုဖိုင်များ သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်နိုင်သည့် ရိုးရှင်းသောပုံစံများမှလွဲ၍ အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။
အတုလုပ်ခြင်းကို အလကားအတု၊ အပိတ်အတုလုပ်ခြင်းနှင့် အပိတ်ဖောက်ခြင်းဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
1. အခမဲ့အတုလုပ်ခြင်း။လိုအပ်သော ဖောင်များရရှိရန် အပေါ်နှင့်အောက် စင်္ကြံ (anvils) အကြား သတ္တုကို ရိုက်ခတ်မှု သို့မဟုတ် ဖိအားကို အသုံးပြု၍ အဓိကအားဖြင့် manual forging နှင့် mechanical forging ရှိပါသည်။
2. အတုလုပ်သေဆုံး။Die Forging ကို Open Die Forging နှင့် Closed Die Forging ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။သတ္တုအလွတ်ကို ထုလုပ်ရာတွင် ထုလုပ်ရာတွင် ဖိသိပ်ထားပြီး ပုံပျက်နေပါသည်။၎င်းကို အေးသောခေါင်းစီး၊ လှိမ့်ဖော်ခြင်း၊ အမြှေးယောင်ခြင်း နှင့် ထုတ်ယူခြင်းစသည်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ခဏနေပါ။
3. အပိတ်သေတ္တာတွင် အတုလုပ်ခြင်း နှင့် အပိတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင် flash မရှိသောကြောင့်၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှုန်း မြင့်မားပါသည်။လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံသွင်းမှုများကို အပြီးသတ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ဖလက်ရှ်မရှိသောကြောင့်၊ အတုလုပ်ခြင်း၏ force-bearing area လျော့ကျသွားပြီး လိုအပ်သောဝန်ကိုလည်း လျှော့ချသည်။သို့သော် ကွက်လပ်များကို လုံး၀ ကန့်သတ်ထား၍ မရနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ကွက်လပ်များ၏ ထုထည်ပမာဏကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ထားသင့်ပြီး၊ အတုပြုလုပ်ထားသော အသေများ၏ ဆွေမျိုးအနေအထားနှင့် အတုပြုလုပ်ခြင်း၏ အတိုင်းအတာကို ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့် အတုလုပ်ထားသော အသေများ၏ ဝတ်ဆင်မှုကို လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်။
Rolling သည် သတ္တုပြားတစ်ခုသည် လှည့်နေသော လိပ်တစ်စုံ (ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး) ကိုဖြတ်သန်းသွားသည့် ဖိအားလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။လိပ်များ၏ ဖိသိပ်မှုကြောင့် ပစ္စည်း၏ ဖြတ်ပိုင်းသည် လျော့ကျသွားပြီး အရှည် တိုးလာသည်။ဤသည်မှာ သံမဏိထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးအများဆုံး ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ပရိုဖိုင်များ၊ ပန်းကန်များနှင့် ပိုက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
ရွေ့လျားမှုအရ၊ လှိမ့်ခြင်းနည်းလမ်းများကို အရှည်လိုက် လှိမ့်ခြင်း၊ ကြက်ခြေခတ် လှိမ့်ခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင် လှိမ့်ခြင်းဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
longitudinal rolling process သည် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ လှည့်နေသော လိပ်နှစ်ခုကြားမှ ဖြတ်သန်းသွားကာ ၎င်းတို့ကြားတွင် ပလပ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။
Cross rolling- ပုံပျက်ပြီးနောက် လှိမ့်ထားသော အစိတ်အပိုင်း၏ ရွေ့လျားသော ဦးတည်ချက်သည် လှိမ့်ဝင်ရိုး၏ ဦးတည်ရာနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Skew rolling- လှိမ့်ထားသောအပိုင်းသည် ခရုပတ်ပုံစံဖြင့် ရွေ့လျားပြီး rolling piece နှင့် roll ဝင်ရိုးသည် အထူးထောင့်မရှိပါ။
၎င်းသည် သံမဏိတွင်းရှိ သွန်းလုပ်ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး၊ သံမဏိ၏အစေ့အဆန်များကို သန့်စင်စေပြီး သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သောကြောင့် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံသည် ထူထပ်ကာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ဤတိုးတက်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် သံမဏိသည် isotropic မရှိတော့စေရန်၊လောင်းနေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ပူဖောင်းများ၊ အက်ကွဲကြောင်းများနှင့် လျော့ရဲခြင်းများကို မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားများအောက်တွင် ဂဟေဆော်နိုင်သည်။
1. လှိမ့်ပြီးနောက်၊ သံမဏိအတွင်းမှ သတ္တုမဟုတ်သော ပါဝင်မှုများ (အဓိကအားဖြင့် ဆာလဖိဒ်များနှင့် အောက်ဆိုဒ်များ၊ ဆီလီကိတ်များ) ကို ပါးလွှာသော အလွှာများအဖြစ် ဖိပြီး အလွှာများ (interlayer) ဖြစ်ပေါ်လာသည်။Delamination သည် အထူဦးတည်ချက်တွင် သံမဏိ၏ ဆွဲဆန့်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကို လွန်စွာဆိုးရွားစေပြီး ဂဟေဆက်ကျုံ့သွားသောအခါတွင် အလွှာပါး စုတ်ပြဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ဂဟေဆက်ကျုံ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒေသတွင်း strain သည် ဝန်ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် strain ထက် များစွာပိုကြီးသည့် yield point strain ၏ အဆများစွာ ရောက်ရှိလေ့ရှိသည်။
2. မညီမညာ အအေးခံခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျန်နေသော စိတ်ဖိစီးမှု။Residual stress သည် ပြင်ပအင်အားမပါဘဲ အတွင်းပိုင်း ဟန်ချက်ညီသော ဖိစီးမှုဖြစ်သည်။အမျိုးမျိုးသော အပိုင်းများ၏ ပူသောလှိမ့်ထားသော သံမဏိအပိုင်းများတွင် ထိုကဲ့သို့ ကျန်နေသော ဖိစီးမှုများရှိသည်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ သံမဏိအပိုင်း၏ အပိုင်းအရွယ်အစား ပိုကြီးလေ၊ ကျန်ရှိသော stress ကြီးလေဖြစ်သည်။ကျန်ရှိသောဖိအားသည် မိမိကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီစေသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပြင်ပအင်အား၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် သံမဏိအဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အချို့သော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေသေးသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ပုံပျက်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်သည်။
3. လိပ်ထားသော စတီးလ်ထုတ်ကုန်များသည် အထူနှင့် အစွန်းအကျယ် သတ်မှတ်ချက်များတွင် ထိန်းချုပ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် အပူချဲ့ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို ရင်းနှီးသည်။အစတွင်၊ အလျားနှင့် အထူသည် စံနှုန်းအတိုင်းပင်လျှင် နောက်ဆုံးအအေးခံပြီးနောက် အပျက်သဘောဆောင်သော ကွာခြားချက်အချို့ ရှိလိမ့်မည်။အနုတ်လက္ခဏာခြားနားချက် ပိုကျယ်လေ၊ အထူပိုလေလေ၊ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုသိသာလေပါပဲ။ထို့ကြောင့်၊ အရွယ်အစားကြီးမားသောသံမဏိအတွက်၊ သံမဏိ၏ဘေးထွက်အကျယ်၊ အထူ၊ အလျား၊ ထောင့်နှင့် ဘေးဘောင်များသည် တိကျလွန်းလှသည်မဟုတ်ပါ။
စာတိုက်အချိန်- ဇွန်လ 18-2021